Bọọlụ Shoka bụ mgbịrịgba igwe igwe na teknụzụ kachasị mma | Akụkọ akụrụngwa
Shoka Bell bụ mgbịrịgba igwe na-agba agba na teknụzụ
Nkà na ụzụ na ime ka ọgbara ọhụrụ na-erute ebe niile. Ọbụna otu ụzọ kacha ochie na nke kachasị ewu ewu n'ụwa, nke anaghị achọ ume karịa ihe anyị ji ụkwụ anyị eme. Anyị anaghị ekwu maka ụgbọ ọzọ karịa igwe. Taa, anyị na-ewetara a-akpali nnọọ mmasị amaghị, a ukwuu na nkà na ụzụ igwe mgbịrịgba. Ihu ọma na ọ bụ nnọọ ọma e mere kemeghi ọkà okwu na-enye anyị otu ọtọ e ji mara dị ka ot mgbịrịgba igwe, ma n'ezie, ọzọ oge. Anyị na-ewetara gị Shoka Bell, mgbịrịgba igwe kwụ otu ebe na ahịa.
Ọ bụ ọrụ ọhụrụ na Kickstarter, yabụ na ọ bụghị eziokwu. Ngwaọrụ ahụ na-eji ngwa nke anyị nwere ike ịhazi ụda dị iche iche iji mee ka ụgbọ ala na ndị na-agagharị ụkwụ nke ọnụnọ anyị mata. Na mgbakwunye, ngwaọrụ ahụ nwere ike ịduzi anyị n'ụzọ kachasị dị ọcha GPS navigator. NAOnye na-akwọ ụgbọ mmiri ga-eduzi anyị n'okporo ụzọ dị nchebe, yana ọsọ kachasị ọsọ, ebe ọ bụ na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-atụkarịkwa anya na mpaghara ndị ọzọ dị mkpa karịa ọsọ dị mfe na ụzọ ha. Ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị dị mfe ma nwee ọgụgụ isi anyị nwere ike ịchọta maka igwe anyị, ọrụ na-atọ ụtọ.
Ọ nwere usoro ngbanwe olu na-akpaka na-adabere na mkpọtụ na gburugburu ebe anyị, na mgbakwunye, o nwere ụda olu asatọ na ebe nchekwa dị iche n'etiti ndị mmadụ na ụgbọ ala, na n'ezie, anyị nwere ike ibudata ụda nke ahaziri ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Dika nhazi oru ngo, ọkà okwu a nwere ike okpukpu abuo nke igwe eji agba igwe. Ihe oru ngo a choro ego nke $ 75.000, obu ezie na o ghafeela $ 175.000. Iji nweta abụọ n'ime ndị a, ị ga-etinye ego $ 189 na ọrụ ahụ. A na-atụle mbupu mbụ maka March 2017, mana dịka ọ na-emekarị na ndị a, ha na-egbu oge ma ọ bụ na-eme mgbe ụfọdụ.
Zụrụ Shoka Bell
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Shoka Bell bụ mgbịrịgba igwe na-agba agba na teknụzụ
A ga-ewepụta ụdị nke Duke Nukem 3D n'izu na-abịa
Sony na Panasonic na-arụ ọrụ na teknụzụ 8k iji kpọsaa egwuregwu Olympic ọzọ na Japan